Zimbabwe's platinum opportunity
The BBC's Brian Hungwe reports from Zimbabwe on the issues surrounding the refining and exporting of platinum, and government legislation regarding ownership.
'Zimbabwe laws protect locals'
Foreign businesses in Zimbabwe have until the end of 2013 to meet new ownership rules giving locals a majority stake.
Can Zimbabwe's platinum industry rise to the top?
Zimbabwe is a country rich in numerous mineral resources such as gold, diamonds and nickel. The real opportunity, however, may lie in platinum. The country has the largest platinum reserves after South Africa, but with their neighbouring country's mining sector in distress, this may be an opportunity for Zimbabwe to raise its profile - if legal pressures allow.Brian Hungwe reports from Zimbabwe's Ngezi mine.Watch: Africa Business Report
Go to next video: Proposal to end SA platinum strike